Fiteny noforonina : fiteny esperanto | Terakasorotany
terakasorotany / April 23, 2012
Ny tena tanjon’ny teny esperanto moa dia ny fananana teny oniversaly izay tsy manana fiaviana ara-tantara, ary noho izany tsy manana fianjadiana firy eo amin’ny lafin’ny ara-kolontsain’izay olona mampiasa azy na amin’ny fiainana mandavanandro na amin’ny fifandraisana amin’ny vahiny. Tsy fitenya ary tsy natao ho fitenin’ny mponina/firenena iray ny fiteny esperanto toa ny fiteny frantsay, anglisy, espaniola, na sinoa fa natao ho fitenin’ny mponina rehetra ; ary notsorina ny fitsipi-pitenenana ary ny voambolana mba hanamora ny fianarana azy.
Ny lafitsara amin’ny fiteny esperanto ho fiteny iraisam-pirenena, dia izy io mora ianarana ary mora tononina tsy ohatry ny teny anglisy (miisa eo amin’ny zatonjatony eo ho eo ny fitsipi-pitenenana). Izy io koa amin’izay tsy mi-”favoriser” ny olona miteny anglisy, izany hoe ny britisy sy ny amerikana intsony no mahazo tsy mianatra teny vahiny. Fahatelo, mety tsy very vola amin’ny dikan-teny isan-karazany intsony ny fikambanana tsirairay (toa ny vondrona eoropeana izay mandany 0,3 miliara euro amin’ny dikanteny).
Tsy misy statistika tena ofisialy mikasika ireo olona miteny esperanto. Fa lazaina fa eo amin’ny roa ka hatramin’ny 10 tapitrisa any ho any ny isan’ny olona miteny esperanto. Iray na roa alina amin’ireo folo tapitrisa ireo monja no afaka miteny azy tsara ho mira-lenta amin’ny teny nibeazany. Ampahazaton’ireo mpiteny esperanto tsara ireo no nibe tamin’ny teny esperanto (izay antsoinjareo koa hoe denaska parolanto)
April 23, 2012 in Malagasy. Tags: earth, Fiainana, fiteny, tahirinkevitra
← Hatsarana sa habetsahana ?
Kriollatino, fiteny noforonina : toko voalohany →